Photos: Wyne Su Khine Thein's Second Solo Album Promotion Event | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Photos: Wyne Su Khine Thein's Second Solo Album Promotion Event
Here are some photos from Myanmar Popular Pop Signer Wyne Su Khine Thein's second solo album, titled "Magic" or "Myat Lae", promotion event which was held on 1st October 2011 at Taw Won Centre, Yangon. There are 12 New Songs in this Album. Thu Kha Main Hlaing, Shwe Jor Jor, Za Whar, Sai Sai Kham Hlaing, San Pee, Phoe Kar, Moe Moe, Aung La, Ar T and Nyi Min Khine compose for the songs. The "Magic" or "Myat Lat" Album is produced by Excellent Creation.
အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့က တော်ဝင်စင်တာမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီး "မျက်လှည့်" မိတ်ဆက်ပွဲ
Myanmar Popular Pop Singer Wyne Su Khine Thein @ "Myat Lae" Album Promotion Event
Photos By Ko Chit
aungmoenaingOctober 3, 2011 at 1:07 AMi very crazy u songs Plz u gmail account thz my gmail account name aprilrose14300@gmail.comok bye byeReplyDeleteNinzi TamuOctober 3, 2011 at 5:17 AMကြိူးစားပါနော် အရင်ခွေထဲကသီချင်းတွေလဲအကုန်ကောင်းပါတယ် အခွေသစ် အော်စီ ကိုရောက်လာရင်အားပေးဖို့အဆင်သင့်ပါReplyDeleteThutawOctober 3, 2011 at 12:44 PMဝိုင်းစု သီချင်းလေးတွေကကောင်းပါတယ်...ခံစားလို့လဲရပါတယ်...ဝိုင်းစုရဲ့ခံစားချက်နဲ့လဲထပ်တူကျလိမ့်မယ်လို့ထင်းပါတယ်...အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်...ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါ...အမြင့်ရောက်လေ လေဒဏ် မိုးဒဏ်ကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားပါ.... အမြဲအားပေးနေတဲ့ သူတော်..ReplyDeleteForeverFriendOctober 4, 2011 at 1:13 AM၀ိုင်းစုသီချင်းတွေကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။အမြဲလည်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။ ဆက်ပြီး လူငယ့်အကြိုက်တေးလေးတွေကို ဆိုချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စုံတွဲတေးလေးတွေရောနော်ဘိုင်ဘိုင်ReplyDeleteBaby rapperOctober 4, 2011 at 6:16 AMmy sister said,,,her songs very very nice in this second album..gona buy one too!! big fans of u , ma wine su :)ReplyDeleteSandarLaminOctober 4, 2011 at 7:07 AMhere are Wine Su new album song !!!http://www.youtube.com/watch?v=IV_Jr3X_tlg&feature=relatedReplyDeletelahkoOctober 5, 2011 at 11:30 AMI like မ ၀ိုင်းစုသီချင်းတွေ...ကြိူးစားပါနော် :)ReplyDeletetuntunOctober 6, 2011 at 1:47 AMကောင်းပါတယ်ကြိူးစာပါReplyDeletetuntunOctober 6, 2011 at 1:48 AMကောင်းပါတယ်ကြိူးစာပါReplyDeletelukeOctober 8, 2011 at 4:13 AMသီချင်းလေးတွေကောင်းပါတယ် အသံကတော့ မကောင်းကောင်းအောင် စက်နဲ့အရမ်းပြင်ထားပုံရတယ် တပုဒ်နဲ့တပုဒ်အသံကာလာတောင် မတူတော့ဘူး ထပ်ကြိုးစားပါဦးReplyDeleteye`waiyanOctober 10, 2011 at 8:07 AMi like your all songsReplyDeletehonestyOctober 12, 2011 at 10:52 PMသီချင်းတွေအားလုံးကောင်းပါတယ် ဒီနေရာမှာ အယ်ဘမ် တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလို့ရပါတယ်http://www.mediafire.com/?632m8lp25ckl2qcReplyDeleteagmoenaing1989October 18, 2011 at 1:06 AMသီချင်းတွေ့ကကောင်းပါတယ်.....ဒါဘယ်မှတ်....မကောင်းတာတစ်ခုပါ.....သတင်းတွေ့က....ဘယ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ.....ကျော်ကြားချင်ရင်အဲလို့ဖြစ်လို့မရဘူးနော်...စကားပုံလဲတွေကိုကြည့်လိုက်ပါထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ဘူးနော်.....ကားမောင်တဲ့...ဒရိုင်ဘာတွေ့ကိုရေးထားတဲ့ကဗျာလိုလို့ဘာလို့လို့ပေါ့...မ၀ိုင်စုရဲ့သောက်လျှင်....မမူးနဲ့မူးလျှင်............မမောင်နဲ့တဲ့အဲဒီအချက်တွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိတ်သတ်တွေ့ကပြောစရာမရှိဘာဘူးနော်အဖြူရောင်စေတနာသပ်သပ်ပါနော်....မ၀ိုင်စုမေးလ်တွေ့လဲပို့ပေးအုံလဲနော်....aprilrose14300@gmail.com............ခေတ္တာ....koreaReplyDeleteMyanmar Music Video MTVDecember 6, 2011 at 2:42 PMyou too so sexyReplyDeleteathangJanuary 22, 2012 at 2:15 AMမင်းရဲ့ ဖုန်နံပါတ်လေးကိုသိချင်တယ် ပိုပေးပါReplyDeleteGP (My@Иm@R)June 6, 2012 at 4:39 PM၀ိုင်းစုရော မိုင်လေးရောကို အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်..။ အောင်မြင်မှု တွေရရှိပြီး.ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကင်းဝေးပါစေဗျာ.။ReplyDeletejulyJune 26, 2012 at 5:16 PMbel thu dway ka ma kaung tar pyaw pyaw, seit dat ma kya nelt naw ma wine su:Dd tat aung myin aung aung kyo sar par;)your big fun:) july theinReplyDeleteAdd commentLoad more...